चर्चामा : मी टू अभियान - Janakpur Today
चर्चामा : मी टू अभियान
सन २०१८ कतिपय दृष्टिले उपलव्धिपूर्ण रह्यो । अमेरिका र उत्तर कोरियाबीचको शिखर वार्ता, बेलायतमा संकट, मी टू अभियानको जागरण सवै यसैबर्ष भयो । नेपाली समृध्दिकोे कथा पनि यसैबर्ष शुरु भयो । फ्रान्सको एयरबस कम्पनीले बनाएको फराकिलो शरीर भएको हवाइजहाज देशमा आयो । चीनमा बनेको सुपर रेल केरुङको बाटो काठमाडौ छिर्ने पक्का भयो । पानी जहाजको त सरकारले अफिस नै खोली सक्यो । अब कोशी र कर्णाली लगायतका सबै नदीमा जहाज चल्ने छ । भेरी नदी बबइमा मिसाइएपछि त्यहाँ पनि जहाज चल्ने सम्भावना छ । अब समृध्दि आउनेछ यो देशमा घूँडा टेकेर । नआइ सुख्खै छैन ।
सन २०१८ को दशैंमा पूरै काठमाडौं शहर किलर मूडमा थियो । दशैं कुनै सांस्कृतिक, सामाजिक र पारिवारिक मूल्यसंग नजोडिएको एकथान चाडमा परिवर्तित हुँदै थियो । मासु र रक्सी अनिवार्य तत्व बनेका थिए दशैंका लागि । कुनैपनि चाडवाडलाई नयाँपनमा सजाउन चाहनेहरु दिक्क भएर बसेका थिए । यो दिग्दारलाग्दो वातावरणमा वसन्तदशैंमाथि एउटा तातो फिचर लेख्न खोजी रहेको थियो ।उ दशैंको निम्तो मान्न अस्ति मामाघर आएको थियो । मामाघरमा अलिकति फरक थियो वातावरण । कान्छा मामा बरहथवाबाट ल्याएको खसीको मासुको पक्कु बनाउँदै थिए । रमाइलो कुरा, कान्छी माइजु पशु बली प्रथाका बिरुध्द आन्दोलनमा सहभागीहुन माइतीघर मण्डला गएकी थिइन । सुनेर वसन्तलाई दिक्क लाग्यो । हुन त सबैको आ–आफनो पेशा र ब्यवसायको कुराहो ।बाबा रामदेवको काम औषधि बेचेर पैसा कमाउनु होइन ।उनको काम आफना भक्तहरुलाई अनुलोम विलोम सिकाउनु हो । स्वाँठ्ठ सास तानेर पेट खुम्च्याउने र भ्mयाट्ट सास छाडेर पेट फुकाउने ।दशैंमा मासुको पक्कु लगाउनु मामाको अतिरिक्त पेशा हो । साँच्चै मासु मिठो पक्कु लगाउँथे मामा । मिठो मासुसंग मिठो शराबको संगतगर्न सवै चाहन्छन । मासुको मिठासमा सबैले मामाको तारिफगर्थे । माइजु भन्दै थिइन, “निजामती सेवाका कर्मचारीहरु पिकनिक जाँदा सिडिओ साहेब सँधै उहाँलाई नै खोज्ने ।”
वसन्तआनन्दपूर्वक मामा घरमा बसेर विभिन्न फिचर लेख्ने तयारीमा लागेको थियो । स्वस्थानी ब्रतकथाको मौसम शुरु भएकोले एक महिना उसले मामाघरमा बिताउनु पथ्र्यो । माइज्यू भानिजलाई टिका लगाइ दिन्थिन । दिनभरि उपवास बस्थिन र वसन्त साँझ स्वास्थानी भन्थ्यो । त्यसपछि माइज्यू उपवास तोडथिन । घरमा भान्जा भएपछि मामा बिन्दास भै जान्थे ।
वसन्तले बिर्सिएको छैनः उसको फिचरको एउटा तत्व मी–टू अभियान पनि हुनेछ । त्यसमा नेपालको अपडेट खासै केही छैन । केही बुध्दिजीवी र केही एक्टिभिष्ट महिलाले अखबार र सामाजिक संजालमा बेनामी गुनासा गरेका छन । एकजना महिलाले आपूm कर्मचारीहुँदा प्रदेश ३ का मन्त्री केशब स्थापितले आपूmसंग गरेको दूराचारको नालिबेली लगाएपछि केशब स्थापित मन्त्रीबाट खोसिएका छन ।
हिन्दूस्तानीको दुःख–दर्दको सबभन्दा बढी चासो शहरिया नेपालीलाई नै हुन्छ । जस्तो कि, पत्रकार एम.जे.अकवर मी–टू अभियानको शिकार भएको घटना निकै चर्चित छ । उनले आफनो पक्षमा ९७ जना वकीलको एक पूरै बटालियन खडा गरेपछि प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उनलाई राज्यमन्त्रीको पदबाट हटाए । एम.जे. अकवर कोलकाताबाट निस्किने साप्ताहिक सनडेको सम्पादक हुँदा समाजवादी, कोलकाताबाट निस्किने तर दिल्लीमा बढी चलेको टेलिग्राफको प्रधान सम्पादकहुँदा भारतीय राष्ट्रिय कांग्रेसको (इन्दिरा) र पछिल्लो समय बुध्दिजीवीको रुपमा बाँच्दा भारतीय जनतापार्टीका सदस्य रहेका हुन । यी विव्दानको यस्तो रुप होला भन्ने कसैले सोचेका थिएनन । भारतमा धर्म–निरपेक्ष राजनीतिका कट्टर समर्थक एम.जे.को यो रुपान्तरण साँच्चै गजबकै रह्यो । एकजना मुसलमानले मन्त्री पदकै लागि हिन्दू पार्टीमा लाग्नु अनौठो नै हो । भारतमा समान धर्मावलम्बी पार्टीमा लागेका राजनीतिज्ञ बीच ‘आयाराम–गयाराम’ चलिरहने खेल हो । तर, सत्ताका लागि सिध्दान्तमा नै आयाराम–गयारामएम.जे.मात्रै होलान । वसन्तले सोच्यो, ‘के हुन त अकवर ? उनी हिन्दू होइनन । मुसलमानले उनलाई ‘काफिर’ भनेर घृणा गर्दछन । भनेपछि, एम.जे. सेकुलर रहेनन । अब, के हुन त उनी ?’
मी–टूकै अर्को प्रसंगमा वसन्तको मन अडियो । भारतीय अंग्रेजी लेखिका इरा त्रिवेदीले आपूm उपन्यासकार चेतन भगतबाट (यौन) उत्पीडित भएको जानकारी सार्वजनिक गरिन । चेतन भगत जागरुकलेखक हुन । चेतनले इरासंगको आफनो मी टू सम्बन्धको खुलाशागर्दै स्पष्टिकरण दिए, ‘निम्तो इराले नै दिएकी हुन । उनले मलाई ‘मिस यू, किस यू’ भनेर मेसेज पठाइन । त्यसपछि मात्रै मैले उनलाई राम्ररी चिन्ने मौका पाएको हूँ ।’
वसन्त सोच्दै थियो – लोभ राजनीतिको फेनोमेना भएको छ । हाम्रो आफनै देशमा त अकवरभन्दा लोभी र पापीको संख्या जनसंख्याको औसतमा पनि केही बढी नै होला । जतिसुकै दवाउन खोजेपनि बलात्कारपछि मारिएकी कन्चनपुरकी निर्मला काण्ड दबेको छैन । बितेको दशैंले त्यसलाई साइडमा मात्रै पारेको थियो । प्रधानमन्त्री ओलीले छाती ठोकेर प्रतिरक्षा गरेका वम दिदी–बहिनी जनताको शंकाबाट मुक्त भएका छैनन । अहिले त उनीहरु आफैं सुरक्षा र न्यायको खोजीमा संघीय राजधानीमा शरणार्थी बनेका छन । प्रधानमन्त्री के.पी.ओलीले भनि सकेका छन, ‘निर्मला काण्डको टुंगोलाग्न बाह«बर्ष पनि लाग्नसक्छ ।’
नेपालका निर्णायक तहमा रहेका पुलिस अफिसरहरु स्कटल्याण्ड यार्डमा प्रशिक्षित छन । अथवा, वर्तमानको नेपाल पुलिसमा त्यो पींढि नभएपनि ‘हिंग बाँधेको टालो’ पक्कैछ । निर्मला काण्डमा आइजीपी साहेवले जनताको खप्की निकै खाए । तर, बलात्कारी र हत्याराहरुले आइजीपी साहेबलाई यसको सुईंको दिएका थिएनन । त्यस्तो सुर्ईंको पाएको भए आइजीपी साहेबले सोझै ती बदमासहरुलाई ठेगान लगाइ सक्थे । गाली खानुपर्ने मुख्य ब्यक्तित्व स्वयं प्रम ओली र उनका गृहमन्त्री रामबहादुर ‘वादल’ थिए । तर, उनीहरु दुवैले अपराधी समाउन सकेनन ।
वसन्तले नेपालको मी–टू अभियानको सम्पूर्ण ‘चेकजाँच’ गरी सकेको थियो । नेपालका मी–टू महिला साहसी नभएका होइनन । तर, उनीहरु दोहोरो चरित्र बाँची रहेका छन । कति केटीको कन्फेसन लंगडो थियो । देशको महत्वपूर्ण प्रकाशन संस्था कान्तिपुर प्रकाशनपनि मीटूमा अल्झिन खोज्यो । संस्थाको कुन चाहीं सम्पादकले कुन चाहीं महिला रिपोर्टरलाई मोटरमा लिफ्ट दिएर ‘किस’ गर्न खोज्यो रे । उनले यसको खुलाशा गरेकी छैनन । अलि गहिरो छानवीनगर्ने हो भने त्यो सम्पादकपनि पत्तो नलाग्ने ‘बाज’ त पक्कै होइन । वसन्तले केही महत्वपूर्ण ब्यक्तिहरुको ट्विटर अकाउण्टको बास्तबिकता पत्ता लगाएको थियो । ती सबै ‘फेकु’ थिए । फेक अकाउण्टबाट मानिसको बास्तबिक अवस्था थाह हुँदैन । केही ‘मी–टू’ हरुको बास्तविकता उसलाई थाह थियो । झण्डै दुइ दर्जन बुध्दिजीवीको ब्यक्तित्वको स्क्यानिङ भएको थियोे । ती मध्ये महिला र पुरुष दुवै जानी जानी ‘मियाँ–बीबी’ राजी तो क्या करेगा काजी? भन्ने मोडमा पुगेका थिए । अब अहिले आएर त्यो घटनाको खोतल–खातलगर्नुको अर्थ थिएन ।
राजनीतिमा के होला हालत मी–टू को ?भर्खरै नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका धुरन्धर नेता वामदेव गौतमलाई राजनीतिले मी–टू भनिदियो । त्यसपछि उनी भारी मनले दशैं मनाउन लागेका छन । वामदेवलाई संसदमा छिराएर आ–आफनो स्वार्थ पूरागर्ने तजबीजमा लागेका प्रम ओली र अध्यक्ष प्रचण्डले मात खाए । वामदेवलाई टेकाउन दुवै नेताले प्रयोग गरेको लौरो साह«ै लूलो पर्यो ।
मी–टूको प्रभावबाट नेपालको राजनीति सर्वथा मुक्त छैन । कांग्रेस, कम्युनिष्ट, राजपा, राप्रपा, फोरम लगायतका सवै बर्गका नेताहरु मी–टूको गहिरो प्रभावमा छन । ‘अहिले नै यसै हो भन्न किन पर्यो र ?’ वसन्तले सोच्यो, ‘यो इस्सूले गहिरो अनुसन्धानको मांग गरेको छ ।’
जनकपुर बमकाण्डको अन्तिम सुनवाइ सुरु
स्थानीयवासीको कुटपिटबाट सैनिक जवानको मृत्यु भएपछि सिरहाको तेनुवापट्टी सुनसान
सिरहाको कल्याणपुर नगरपालिकाको काम ठप्प